Calaamadaha SF 3 ee loogu talagalay Mac sidoo kale waxaa lagu cusboonaysiiyay astaamo cusub | Waxaan ka imid mac
WWDC 2021 bishii Juun, Apple ayaa sidoo kale soo bandhigtay casriyeynta cusub ee Calaamadaha SF 3. Hagaag, halkii, waxay soo bandhigtay waxa ahaa barnaamijka barnaamijka oo ku daraya astaamo iyo xarfo cusub aaladda Apple. Si gaar ah loogu abuuray soo -saareyaasha, waxaad u baahan tahay Mac leh macOS Catalina si aad u rakibto oo ula falgasho.
WWDC -kii ugu dambeeyay bishii Juun ee sannadkan, Apple wuxuu soo bandhigay beta astaamaha SF 3. Nooca cusub ee Calaamadaha SF, oo ay ku jiraan in ka badan 600 astaamood oo cusub. Waqtigan xaadirka ah waxaa heli kara dadweynaha guud ahaan iyo iyada oo si rasmi ah loo bilaabay. Calaamadaha SF waa maktabad ka badan 3,100 calaamadood oo horumariyayaashu u adeegsan karaan mashaariicdooda. Marka lagu daro 600 astaamood oo cusub, Calaamadaha SF 3 waxay soo bandhigaan habaynta midabka oo la hagaajiyay, kormeere cusub, iyo taageero la hagaajiyay oo loogu talagalay astaamaha caadada ah.
Barnaamijku waa maktabad sawir -qaade ah oo loogu talagalay inay si aan kala go 'lahayn ula midowdo San Francisco, font -ka nidaamka ee aaladaha Apple. Calaamaduhu waxay ku yimaadaan saddex miisaan waxayna si toos ah ula jaanqaadaan summadaha qoraalka. Waa la dhoofin karaa oo lagu tafatiran karaa qalabka tafatirka sawirrada vector si loo abuuro calaamadaha caadada leh naqshad la wadaago iyo sifooyinka helitaanka.
Apple ayaa sidoo kale bilaabay cusboonaysiinta noocyada San Francisco iyo ilahaaga New York, kuwaas oo loo adeegsado is -dhexgalyo badan oo ku jira nidaamyada hawlgalka ee shirkadda.
sidaas darteed Astaamaha SF 3 sida ilaha asalka ah ee Apple laga soo dejisan karo faylka Websaydhka horumariyaha Apple. Sidii aan sheegnay bilowgii maqaalkan, Mac leh macOS Catalina ama wixii ka dambeeya ayaa laga rabaa inuu rakibo barnaamijka cusub ee uu hadda sii daayay Apple.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Astaamaha SF 3 ha joojin booqashada boggan sonde Apple ayaa sharaxaya waxa ay ka kooban yihiin dhammaan astaamahan iyo higgaadyadan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Catalina » Calaamadaha SF 3 ee loogu talagalay Mac sidoo kale waxaa lagu cusboonaysiiyaa astaamo cusub
Khasnajiga Apple Gary Wipfler ayaa hawlgab noqday 35 sano kadib